Nkwakọ ngwaahịa Plastic
A ahia ahia na 2021
The 2021 Spring Import na Export Trade ngosi ẹkenịmde ke Shijiazhuang City, Hebei Province, China. Companylọ ọrụ anyị nwetara nnukwu ahịa ahịa n'ụlọ ntu nke 22, ma sonye na ọrụ ahịa pụrụ iche na nkwalite na ụlọ mgbasa ozi. Anyị na ngwaahịa na-ukwuu jara onye ọ bụla.
Ọka ọka na-ele anya na-aba uru
Ikwu "ihe dị iche" na 2020 bụ igosipụta ihe doro anya banyere mmetụta nke COVID-19 n'ihe gbasara naanị ihe niile. Ma enwere ike inwe otu akụkụ nke ahịa ọka ebe cliché na-agbachasị nke ọma, nke ahụ nwere ike imetụta mkpebi mkpebi nchekwa gị maka ọka ka owuwe ihe ubi malitere isi ala ụlọ ...
Mkpụrụ ọka na-ekpuchi igwe mkpuchi igwe
Mkpụrụ Mkpuchi Mkpụrụ, A na-emepe igwe na-adabere na ngwakọta nke usoro mmụta na omume. Nkọwapụta ngwaahịa: Nrụpụta kachasị: 5000kg / awa (0-5000kg) Nkwado ikike: ike 1.5kw ikike ike: 120W ike oriri Quantity: 1.6 degrees / hour Na-ebuli elu: 90 cm Ibu: 170 ...
4.3m Gabion netting igwe / Hexagonal waya ntupu igwe / Hot ire gabion Ndinam igwe na China nkọwa
Anyị gabion bụ a akụkụ anọ waya ntupu igbe mere si abụọ kpara akpa hexagonal ntupu na weldmesh nke ígwè waya, Ọzọkwa mesikwuru site selvedges nke arọ waya na-agba ọsọ tinyere n'ọnụ na site transverse diaphragms. A na-ebunye igbe ntupu ndị a na saịtị, ebe ha gbakọtara ...
Nkà na ụzụ na ọkụkọ na-azụ okuko: 2020-08-31
Otu n'ime ụzọ ndị na-eme ọkụkọ ọkụkọ na-agbakwunye uru na ngwaahịa ọ bụla bụ achịcha. Ihe abuo abuo ndi mere ihe eji etinye achicha na ulo ozuzu bu iji mee ka ha di nma ma obu tinye ha ekpomeekpo na udiri. "Ekwenyere m na e nwere usoro isi achịcha abụọ dị na ụlọ ọrụ ọkụkọ, ngwa ngwa na ngwa ụlọ," ka ...
Selectionlọ ọrụ ịhọrọ mkpụrụ osisi Dubai dị njikere maka nnyefe
Selectionlọ ọrụ ịhọrọ mkpụrụ osisi Dubai dị njikere maka nnyefe, daalụ maka nkwado na nnabata gị.
DW200-2000 Nrụgide oru Oru Mgbaaka kpara Press
Nke a bụ na ọdabara ka ikpa akwa-ike akwụkwọ Ndinam kpara pịa chere na ezi selvage, karịsịa maka mgbanaka kpara pịa chere.
2020 Uganda ahịa iji
Ekele dịrị ndị ahịa nọ na Uganda maka ịzụ ndị mkpocha mkpụrụ 5XZFHS-25.
Ngwa na uru nke ike ndọda
Nchịkọta ike ndọda a kapịrị ọnụ dị mfe, dị mfe iji dochie anya ntanetị ntanetị. Enwere ike iji ya na ebu. O nwere ike iji ya mee ihe site na igbanwe ihuenyo dị iche iche na nkọwa dị iche iche: 1. nwere oke ike dị iche iche dị na di na nwunye ọ bụla ...
Thekpụrụ ọrụ nke igwe nhọta
N'ụzọ dị a doesaa ka olulu ahụ si ahọrọ mkpụrụ? Gịnị bụ ụkpụrụ nke igwe ahọpụtara? Kedu ụdị igwe eji arụ ọrụ? Usoro nhazi na-adabere n'ụkpụrụ ahụ na ihe nhawa nke oke na njupụta ga-eme na usoro mmịpụta nke ihe granular ...
Gịnị bụ njirimara nke ịghasa ebu
Rewghasa ebu nwere ndị na-esonụ e ji mara: 1) Ọdịdị bụ dịtụ mfe na-eri bụ dịtụ ala. 2) Ọrụ a pụrụ ịdabere na ya, mmezi na njikwa dị mfe .. 3) Nkọwa ọnụ, obere akụkụ obe, obere akara ụkwụ. N'ebe nbanye na ụzọ ọpụpụ, ụlọ ndị ọrụ ahụ anaghị adị mfe ...